अन्तिम निर्णय - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2019-04 > अन्तिम निर्णय
के तपाइँ न्याय को दिन भगवान को सामु उभिन सक्षम हुनुहुनेछ? यो सबै जीवित र मरेको निर्णय हो र निकटता पुनरुत्थान संग सम्बन्धित छ। केहि ईसाईहरु यो घटना डराउँछन्। हामीले यसबाट डराउनु पर्ने एउटा कारण छ, किनकि हामी सबैले पाप गर्छौं: "तिनीहरू सबै पापी हुन् र उनीहरूसँग परमेश्वरको अगाडि हुनु पर्ने महिमाको अभाव छ" (रोमी ३:२३)।
तपाईं कति पटक पाप गर्नुहुन्छ? बेलाबेलामा? हरेक दिन? मानिस जन्मजात पापी छ र पापले मृत्यु ल्याउँछ। “बरु, प्रलोभनमा परेका सबैलाई आफ्नै इच्छाले उत्तेजित र प्रलोभनमा पार्छ। त्यस पछि, जब वासना गर्भवती हुन्छ, यसले पापलाई जन्म दिन्छ; तर पाप, जब यो समाप्त हुन्छ, मृत्युलाई जन्म दिन्छ" (याकूब 1,15)।
त्यसोभए के तपाईं परमेश्वरको अगाडि उभिन सक्नुहुन्छ र तपाईंले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएका सबै राम्रा कुराहरू उहाँलाई बताउन सक्नुहुन्छ? तपाइँ समाज मा कती महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, कती सामुदायिक सेवा गर्नुभयो? तपाईं कत्तिको उच्च योग्य हुनुहुन्छ? होईन - यी मध्ये कुनै पनि तपाइँलाई भगवान को राज्य मा पहुँच दिनेछैन किनकि तपाइँ अझै एक पापी हुनुहुन्छ र भगवान पाप संग बाँच्न सक्नुहुन्न। "नडराऊ, तिमी सानो बगाल! किनकि तिमीलाई राज्य दिन पाउँदा तिम्रो बुबा खुशी हुनुभयो »(लूका १२:३२)। ख्रीष्ट मा मात्र भगवान आफैंले यो विश्वव्यापी मानव समस्या को हल गर्नुभयो। येशूले हाम्रो लागि मर्नुहुँदा हाम्रा सबै पापहरू आफैंमा लिनुभयो। भगवान र मानिस को रूप मा, केवल उनको बलिदान कवर र सबै मानव पापहरु लाई हटाउन सक्छ - सदाको लागी र हरेक व्यक्ति जो मुक्तिदाता को रूप मा उहाँ लाई स्वीकार गर्दछ।
न्यायको दिनमा, तपाईं ख्रीष्टमा पवित्र आत्माबाट परमेश्वरसामु खडा हुनुहुनेछ। यस कारण र केवल यही कारणले गर्दा भगवान तपाईंको पिताले खुशीसाथ तपाईंलाई र ख्रीष्टमा हुने सबैलाई दिनुहुनेछ जो अनन्त राज्यमा त्रिएक परमेश्वरसँग मिलेर बस्छन्।
क्लिफोर्ड मार्स द्वारा